Ukufundiswa kweeMasters eYurophu 2022 2022
Oktobha 18, 2021 Eze uThadayo
Ukufundiswa kweeMasters eYurophu 2022
Izidanga zemfundo yinto entsha yokufunda, jonga iinkcukacha zokwenza isicelo sale mali yokufunda kwi-Yurophu 2022.
I-Scholarship kunye namanye amathuba oncedo lwezezimali anceda abafundi ukuba bahlawule umthwalo wabo wokufunda, kwezinye iimeko, unokugubungela izifundo zabafundi unyaka wonke. Olu ncedo lunokubonelelwa zizikolo, amaziko anjengemibutho yesisa, urhulumente, abafundi, kunye namanye amaqonga.
Ngokwesiqhelo, izifundiswa zinikezelwa kubahlali abasisigxina kunye nabemi belizwe elithile ukubakhuthaza ukuba baqhubeke nemfundo ephezulu kwelo lizwe. Akukho zifundo zininzi ezixhasa abafundi ukuba baqhubeke nezifundo zabo phesheya, yiyo loo nto le posi iluncedo.
Ezemfundo.com, iqonga ebelisebenza iminyaka ekuncedeni abafundi ukuba bafunde phesheya kulo naliphi na ilizwe kunye nesikolo abazikhethele sona ngoku sibonelela nge- € 5000 yokufunda. Eli qonga, iEducations.com ijolise ekukhuthazeni nasekuxhobiseni abafundi ukuba baphonononge ukuthanda kwabo, bahambe kwihlabathi, kwaye babumbe ikamva labo ngokukunceda ufumane inkqubo elungileyo eyunivesithi elungileyo kwilizwe elifanelekileyo.
Isixa-mali se-5000 se-euro semali yokufunda sijoliswe kubafundi abafuna ukwenza isidanga se-masters kwiyunivesithi yaseYurophu. Ayinamsebenzi ukuba yeyiphi inkqubo ofuna ukuyilandela. Isifundi siya kunikwa isemester yokuwa kwe-2022 ukubheka phambili ukuya kwixabiso le- € 5000 ukunceda ekugubungeleni iifizi zezifundo kwaye ufumane inyathelo elinye kufutshane ne-adventure yakho elandelayo.
Ixesha yesicelo: Ngomhla we-16 Meyi 2022 ngo-12: 00 CEST
1 Ulungelelwaniso olufanelekileyo
2 Amaxesha abalulekileyo
3 Iimfuno isicelo
Abafake izicelo abanomdla kufuneka bahambe ngononophelo kwiikhrayitheriya zokufaneleka ezifunekayo ukuze bafake isicelo sobu bufundi.
Kuya kufuneka ufake isicelo (okanye uya kufaka isicelo) eyunivesithi okanye kwisikolo esiphumelele isidanga eYurophu (cofa Apha ukubona ii-FAQs zoluhlu olusemthethweni lwamazwe aseYurophu).
Kuya kufuneka ufake isicelo (okanye uza kufaka isicelo) kwinqanaba le-master-level ukuqala kwisemester ye-2022.
Inkqubo yesidanga kufuneka ifundwe nokuba kungaseYurophu okanye kwi-Intanethi ngokufunda umgama kwiziko laseYurophu.
Kuya kufuneka uhlangabezane neemfuno zokungena eyunivesithi okanye kwisikolo esiphumeleleyo, kubandakanya:
Bamba isidanga esifanelekileyo (isidanga sokuqala)
Dibana neemfuno zolwimi zenkqubo
Kuya kufuneka ubambe okanye uvumeleke ukuba ufake isicelo se-visa yokufunda (ukuba iyasebenza).
Kuya kufuneka ufundele kwelinye ilizwe kwilizwe apho awungommi okanye ngoku uhlala kulo (ngaphandle kokuba ufunda kwelinye ilizwe).
Ezinye iimfuno ezikwenza ube ngumgqatswa ofanelekileyo zezi:
Ingqondo yehlabathi jikelele kwaye inomdla kwezinye iinkcubeko
Ukhuthaziwe kwaye uphefumlelwe ukuba utshintshe umhlaba ngokufanelekileyo
Umfundi ophumelele emagqabini kunye namabakala angafaniyo okukungqina oko
Ukubandakanyeka kumaqela kunye nemisebenzi eyongezelelweyo
Ndonwabile ukuqala i-adventure yakho kunye nokwabelana ngebali lakho kwihlabathi!
Qaphela le mihla iphambili apha ngezantsi
Izicelo zivulekile: 3 Septemba 2021
Izicelo ezikufutshane: Ngomhla we-16 kuCanzibe 2022, 12:00 CEST
Abokugqibela bazisiwe: 13-24 Juni 2022
Ophumeleleyo ubhengezwe: I-4-8 Julayi 2022
Inkxaso mali yokufunda ihlawulwe: Ukuwa kwe-2022 semester
Nantsi indlela onokuthi ufake ngayo isicelo sobufundi
Ukungenisa isincoko esifutshane (amagama angama-400-500) kumbuzo: Kutheni le nto ukhethe isifundo sakho phesheya, kwaye iya kukunceda njani ukuba ukhule njengenkokeli ejolise kwihlabathi liphela?
Nceda uqaphele, izicelo mazingeniswe ngesiNgesi. Izicelo kwezinye iilwimi aziyi kuqwalaselwa.
Ukuba ukhethwe njengomntu wokugqibela, unokucelwa ukuba unikeze:
Ubungqina bokwamkelwa eyunivesithi ngohlobo lwekopi yeleta yokwamkela
Ubungqina besidanga sokuqala kwinqanaba lekopi ebhaliweyo
Ubungqina bokuzazisa ngohlobo lwekopi yepaspoti yakho
Iikopi zamaxwebhu mazibe ziskena imibala. Nceda ube nala maxwebhu ngesandla ukuba ukhethwe njengowokugqibela. Uya kuba neentsuku ezisi-7 ukusukela kwixesha ofumana ngalo isaziso sokhetho lokugqibela ukuze usinike olu xwebhu.
Ukuba ukhethwe njengophumeleleyo, kufuneka:
Phendula ngaphakathi kweentsuku ezi-3 zokufumana isibonelelo sokufunda ukuze uqinisekise ukwamkelwa
Ukuqala isicelo sakho Cofa apha
Le € 5000 ibonelelwa yiEzemfundo.com iya kukhuthaza abafundi ukuba baye kolo phando bahlala belangazelela kwaye baqhubeke nenkqubo yenkosi yabo abayithandayo kwiyunivesithi abayithandayo eYurophu. Eli lithuba elinokukuzisela izibonelelo ezingakumbi xa sele uqalile olu hambo.
IYunivesithi yaseYurophu Masters Scholarship Scholarship Postgraduate Isifundo kwamanye amazwe Isikhokelo Ukufunda kwelinye ilizwe kunye neScholarship